အများစုကတော့ကကြက်သားနှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူမှိုကနေဖန်ဆင်းတော်ပြင်သစ်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘယ်လို julienne အာလူးချက်ပြုတ်ရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။
အာလူး - 600 ဂရမ်;
ကြက်သွန် - 300 ဂရမ်;
မှို - 250 g နဲ့;
ကြက်သား - 250 ဂရမ်;
Mayonnaise - 200 ဂရမ်;
သံပုရာ - တစ်ဝက်;
ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်း - မြည်းစမ်းရန်,
မှိုနှင့်ငါ့ shinkuem ပါးလွှာချပ်။ ကြက်သွန်နီထု, တစ်ဦး grater အပေါ်သုံးမုန်လာဥပြိုလဲသွားပြီ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီပြန့်နှံ့ကြက်သွန်နဲ့ကြော်ဒယ်အိုးတွင်, 2-3 မိနစ်ကြော်, ထို့နောက်မုန်လာဥ add နောက်ထပ်2မိနစ်ကြော်, ထို့နောက်မှို add နှင့်စုပေါင်းအခြား 10 မိနစ်ပြင်ဆင်နေ။
ကြက်သားတန်း ကိုငါ့, obsushivayut နှင့်အသေးစားကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့။ ထို့နောက်တစ်ဦးနက်ရှိုင်းသောပန်းကန်ထဲသို့ခေါက်သံပုရာဖျော်ရည် Mayonnaise, ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆားတစ်ဇွန်းနှင့်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။ နှိုးဆော်နှင့်အေးမြသောနေရာတွင်2နာရီအဘို့ချန်ခြွင်း။
အာလူးသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ပါးလွှာချပ်သို့ခုတ်ဖြတ်။ ထို့နောက်ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ရောနှောနှင့်ဖြန်း။ julienne ၏ပြင်ဆင်မှုမသည်နက်သောဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ကြွေပန်းကန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီမျက်နှာပြင်နှင့်ပြန့်ပွားအာလူးအလွှာ lubricates ။ ထို့နောက်မှိုနှင့်မုန်လာဥကြက်သွန်နီ၏ထိပ်ပေါ်မှာတင်ကြ၏ - ကြက်သား။ Mayonnaise နှင့်အတူထိပ်ပေါ်မှာပန်းကန်ဖြည့်ပါနှင့်မီးဖိုတဖို၌ပေးပို့ပါ။ 200 ဒီဂရီအပူချိန်မှာ ကြက်သား julienne 40 မိနစ်, အာလူး, မှိုနှင့်မုန့်ဖုတ်ထို့နောက် julienne ခြစ်ဒိန်ခဲဖြန်းခြင်းနှင့်ပူစားပွဲပေါ်မှာရန်နောက်ထပ် 10 မိနစ်ပြင်ဆင်နေ။
လမ်းအစားကြက်သားအားဖြင့်သင်တို့ကို minced ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့တင်ဒါသည်အထိဒယ်အိုးထဲမှာကြော်, အဲဒီနောက်စာရွက်အညီအရာရာကိုပြင်ဆင်လော့။ minced အသားနဲ့အာလူးနှင့်အတူယူလနျြလည်းအလွန်အရသာရှိတဲ့အထဲကလာပါတယ်။
ကြီးမားသောအာလူး - 10 PCs; ။
ပြုတ်ကြက်သားရင်သား - 200 ဂရမ်;
ကြက်သွန် - 150 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
မုန့် 10% အဆီ - 200 ml ကို;
အာလူးဝက်အတွင်းဖြတ်ဂရုတစိုက် MY, ပြီးတော့ဂရုတစိုက်အလယ်အထဲကဖြတ် - ကျွန်တော်တစ်ဦး julienne အာလူး formochka ရသင့်ပါတယ်။ မှို, ကြက်သားရင်သား, ထုဖြတ်ကြက်သွန်နီ။ တစ်ကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာ, ထောပတ်အရည်ပျော်ကြက်သွန်ပျံ့နှံ့ခန့်5မိနစ်ကကြော်, ထို့နောက်မှို add နောက်ထပ်7မိနစ်ကြော်။ ထို့နောက်ကြက်သားရင်သားကင်ဆာပျံ့နှံ့, ရှိသမျှကောင်းရောနှောနှင့်5မိနစ်ချက်ပြုတ်။
အဆုံးမှာမုန့်ညက် add ကောင်းစွာနောက်တဖန်အရာအားလုံးကိုရောမွှေနှင့်မုန့်အတွက်ကိုလောင်း။ အားလုံးအတူတူနှစ်မိနစ် protushivaem ။ တစ်မုန့်ဖုတ်ထောပတ်လူး, သူ့ကိုပေါ်တွင်အာလူးကို တင်. , ပေါ့ပေါ့တန်တန်အချို့ဆားထည့်နဲ့အတွင်းရှိ stuffing ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အာလူးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသည်အထိ 200 ဒီဂရီအပူချိန်မှာအကြောင်းကို 1 နာရီဖုတ်ရမည်။ ထို့နောက်ခြစ်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ julienne အာလူးထဲမှာဖြန်းကြောင့်အရည်ပျော်ဖို့မီးဖို၌ပြန်ထားတော်မူ၏။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်းကန်တွေနဲ့ဖျန်း်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီ။
အိုး Julienne အာလူး
အာလူး - 500 ဂရမ်;
ဒိန်ခဲအစိုင်အခဲ - 150 ဂရမ်;
pasty မုန့်ဒိန်ခဲ - 100 ဂရမ်;
ထောပတ် - 30 ဂရမ်,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်အတူတူကြော်စားမှိုနှင့်ကြက်သွန်နီကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ သန့်ရှင်း Cube သို့ဖြတ်ပြီးတော့ "ယူနီဖောင်းမှာ" အာလူးပြုတ်။ ငံပြာရည်ဟင်းချက်: ကရွှေအညိုရောင်ဖြစ်လာသည်အထိခြောက်သွေ့ဒယ်အိုးအတွက်ထောပတ်ထပ်ထည့်, မုန့်ညက်ကြော်။ ရေ၏ 50 ml ကိုလောင်း, မုန့်ညက်သို့စုပ်ယူနိုင်ပြီးတစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိရန်ကောင်းစွာနှိုးဆော်ပြီးနောက်။ ထိုအခါဒိန်ခဲ, ဆား, နံ့သာမျိုးကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကြွက်ကြွက်ဆူမှတက်အလေးချိန်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ထို့နောက်မီးကို turn off အနည်းငယ်အအေးငံပြာရည်ပေးပြီး2ကြက်ဥမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေ။ အိုး၏အောက်ခြေတွင်အာလူး, မှို, ကြက်သွန်နီ, ကုန်တယ်ကြက်သွန်ဖြူသွင်းထားအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုငံပြာရည်လောင်းနှင့်ခြစ်ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်း။ Julienne မိနစ် 30 မီးဖို၌ဖုတ်ရမည်။
အိမ်မှာ baklava ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပီဇာ - စာရွက်
Shurpa ဘဲ - တမိသားစုလုံးအတွက်အရသာအစားအစာများ
ပြင်သစ်ကြက်သွန်နီဟင်းချို - အရသာဟင်းလျာများ၏လက်ရာမြောက်သောချက်ပြုတ်နည်းများ
Pete - စာရွက်
သွေးဆုံးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ - မနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများပပျောက်ပါလိမ့်မယ်သောအကောင်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါး
ခေါက်ဆွဲ - အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်
Calathea - ခြောက်သွေ့ကောက်အရွက်
"7 ပွင့်ချပ်" တဲ့အစားအစာအပေါ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Dogwood - သင်သိသင့်သောအသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications,
ဘဲလေးတိုက်ခန်းဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Nevados
မုယောစပါးဂျုံယာဂု - ဘယ်လိုစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်လော
Kylie Jenner $ 1.4 သန်း၏လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိ
ဆောင်းရာသီတွင် Adjika အရသာရှိတဲ့ခရမ်းချဉ်သီး
Michelin စားသောက်ဆိုင်ထိုက်အံ့သြဖွယ် pastries - သံလွင်နှင့်အတူမုန့်